Taageerayaasha Chelsea Oo Weerar Ku Qaaday Bruno Fernandes
Taageerayaasha Chelsea ayaa weerar culus ku qaaday Bruno Fernandes iyagoo ku eedeeyay inuu caado ka dhigtay istuurka jiliinka ah Is-aaragii ay Man United guuldarada FA Cup soo gaartay xalay.
Xiddiga khadka dhexe ee Portugal ayaa gool sabarsiin ah oo rigoore ahaa u dhaliyay Red Devils iyadoo Chelsea ay 3-1 ku badisay.
Nusa saac markii ay socotay ciyaarta, xiddigii hore Sporting Lisbon ayaa dhulka isku tuuray ka dib kubad uu kula xafiiltamayay Mateo Kovacic.
Ku celiskii la daawaday ayaa muujinaya in taabasho aysan jirin, haddii ay jirtay ay aheyd mid aad u yar, taasoo keentay in taageerayaasha Chelsea oo careysan inay ku tilmaamaan Fernandes mid qiyaano badan oo istuura.
Taageere ayaa soo qoray: “Bruno Fernandes wuxuu ka ganacsadaa istuurista.”
Bruno Fernandes is a DIVE merchant. #CFC
Mid kale ayaa yiri: “Bruno Fernandes wuxuu isku tuuri doonaa dhulka haddii ciyaaryahan Chelsea ah uu ku neefsado”
Mid seddexaad ayaa yiri: “Waa necbahay ninkaan, waa ciyaaryahan fiican laakiin istuuristaan waxay saameyn xun ku yeelan doontaa waayihiisa ciyaareed.”
Waa markii seddexaad ee uu Fernandes qeyb ka noqdo eedeyn istuuris ah tan iyo markii xilli ciyaareedka Premier League dib loo bilaabay.
Man this guy’s joker he’s after reaction looking like he was in absolute pain
— Michelle💝♓ (@michellesonia20) July 19, 2020
Gabar taageero ah ayaa iyadana soo qortay: “Ninkaan wixiisa waa kaftan, ka dib dhacdada waxa uu u muuqdaa mid xanuun daraan uu hayo”
Horaantii bishaan, xiddiga khadka dhexe ayaa rigoore ku guuleystay kulan ay la ciyaarayteen Aston Villa isagoo canqoga uga istagay Ezri Konsa laakiin dhulka ayuu isku tuuray isagoo qabsaday laf dheerta.
Dhanka kale, waxa uu sidoo kale dhulka isku tuuray markii ay kubad ku xafiiltamayeen Eric Dier Is-aaragii barbaraha 1-1 ku dhamaaday ee Tottenham, markii hore waxaa loo dhigay rigoore laakiin VAR ayaa ka laabatay go’aankaas.